u-Maketa uhlangana nama-Proteas amancane njenge-High Performance Consultant
Malibongwe Maketa, assistant coach of South Africa (l)
Namhlanje i-Cricket South Africa (CSA) imemezele ukuqokwa ngokushesha kwa-Malibongwe Maketa njenge-high performance consultant kwiqembu le-South Africa U19s elilungiselela i-ICC under-19 World Cup.
Uzohlangana neqembu lomqeqeshi u-Lawrence Mahatlane ngaphambi kwe-quadrangular series bedlala ne-India, i-New Zealand ne-Zimbabwe ezoqala eThekwini ngoLwesihlanu futhi uzoqhubeka kuze kudlule i-World Cup yabo.
“Njengoba senzile nabeluleki abakhona kuma-Standard Bank Proteas kubalulekile ukuthi kube nabantu abanesipiliyoni sesizwe kumaqembu ethu ahlukile,” kuphawula i-CSA Acting Director of Cricket u-Graeme Smith.
“u-Mali ungena kahle, wasebenza njengosekela mqeqeshi ka-Ottis Gibson kuma-Proteas kusukela ngo-2017 kuyele ku-2019. Ngaphambi kwalokho wayengumqeqeshi ophumelelayo kuma-franchise nama-Warriors, wababeka kwezamanqamu e-Momentum One-Day Cup ne-T20 Challenge ngo-2016/17.”
“Ukunqoba namhlanje ngezinti ezinhlanu kuhlulwa i-India kumdlalo wokugcina we-Youth ODI Series e-East London kungabonakala njengento enhle futhi sizokwenza konke esingakwenza ukubasekela,” esho evala e-Smith.
u-De Kock no-Philander bakhuphuke kuma-ICC Test rankings Ama-Proteas asiqale ngokunqoba isigaba esisha futhi athola amaphuzu okuqala e-WTC u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Burns uhola i-England ezama ukujaha umphumela oyirekhodi u-Markram ukhishiwe kwimidlalo esele kwi-England Test series u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Jacques Kallis umenyezelwe njengomeluleki wokushaya kuma-Proteas Bayisithupha abadlali abasha ababalwe kwiqembu lama-Proteas lama-Test India wrap up series to claim 120 Test match points u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas u-Linde uzothatha indawo ka-Maharaj kumdlalo we-Test wokugcina